लुकाकु र केन गोल्डेन बुटका दाबेदार » होमल्याण्ड खबर
लुकाकु र केन गोल्डेन बुटका दाबेदार
admin July 8, 18 9:28 am
रसियामा जारी फिफा विश्वकपका क्वार्टरफाइनल खेलहरु शनिबार सकिएका छन् । सेमिफाइनल खेल मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ । विश्वकवका ६४ खेलमध्ये ६० खेल भइसकेका छन् । अहिलेसम्म सम्पन्न खेलमा सर्वाधिक गोलकर्ता खेलाडी, सबैभन्दा धेरै गोल गर्ने राष्ट्र र सबैभन्दा बढी गोलका लागि प्रयास गर्ने खेलाडी को–को हुन् त ?
ह्यारी केन–६ गोल
यसपटकको विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ताको रेकर्ड अहिलेसम्म इंग्ल्यान्डका कप्तान ह्यारी केनको छ । २४ वर्षीय केनले खेलेका ५ मध्ये ३ खेलमा ६ गोल गरेका छन् । उनले समूह चरणमा पानामाविरुद्धको खेलमा ह्याट्रिक गोल गरेका थिए । त्यस्तै, ट्युनिसियाविरुद्धको खेलमा २ गोल गरे । कोलम्बियाविरुद्धको खेलमा १ गोल गर्दै उनी जारी विश्वकपमा सर्वाधिक गोलकर्ता बनेका छन् । इंग्ल्यान्डलाई सेमिफाइनलसम्म पुर्याउन केनले ६ गोलको योगदान दिएका छन् । केन रसिया विश्वकपमा गोल्डेन बुटको दाबेदारसमेत हुन् ।
उनीसँगको प्रतिस्पर्धामा छन् सेमिफाइनल पुगेको अर्को मुलुक बेल्जियमका फरवार्ड रोमेलु लुकाकु । उनले अहिलेसम्म ४ गोल गरेका छन् । त्यस्तै, ४ गोल गर्नेमा यसअघि नै विश्वकपबाट बाहिरिसकेको टिम पोर्चुगलका कप्तान क्रिष्टियानो रोनाल्डो र आयोजक राष्ट्र रसियाका डेनिस चेरिसेभ छन् ।
बेल्जियमको १४ गोल
जारी विश्वकपमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै गोल बेल्जियमले गरेको छ । उसले खेलेका ५ खेलमा १४ गोल गरेको छ । बेल्जियम विश्वकपमा अपराजित रहँदै सेमिफाइनलमा पुगेको छ ।
समूह चरणमा बेल्जियमले पानामालाई ३—०, ट्युनिसियालाई ५—२ र इंग्ल्यान्डलाई १—० गोलले पराजित गरेको थियो । त्यस्तै, प्रि—क्वार्टरफाइनलमा बेल्जियमले जापानलाई ३—२ गोलले पराजित गरेको थियो भने क्वार्टरफाइनल खेलमा ब्राजिललाई २—१ गोलले जितेको थियो ।
सर्वाधिक गोल प्रयास नेयमारको
क्वार्टरफाइनल खेलमा बेल्जियमसँग २—१ गोलले पराजित हुँदै ब्राजिल जारी विश्वकपबाट बाहिरिसकेको छ । ब्राजिलका स्टार नेयमारले रसियामा ५ खेल खेले, जसमध्ये उनले सबैजसो खेलमा गोल गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
ट्रम्प पुटिनको पक्षमा आफ्नै देशको गुप्तचर संस्थालाई छाडे -एफबीआईले सार्वजनिक गरेको विवरण गलत
तनहुँको ऐतिहासिक नगरी बन्दीपुरमा केबुलकार निर्माण गरिने
विश्व भरी बाट प्रशंसा कमाउँदै क्रोएसियाली राष्ट्रप्रमुख
फ्रान्सले जित्यो विश्वकप फुटबलको उपाधि
डा. केसी बचाउन अन्तराष्ट्रिय समुदायको चासो
भक्तपुरका कैयौँ बस्ती डुबानमा, १५ घर ढले
कुनै मुलुकको राष्ट्रप्रमुखका लागि आफ्नो देशको गुप्तचर विभाग निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड...
कतार एयरवेजद्वारा २०१८ फिफा विश्वकप विजेता फ्रान्सलाई बधाई
फिफाको आधिकारिक पार्टनर तथा आधिकारिक एयरलाइन कतार एयरवेजले २०१८ फिफा विश्वकप रुसको विजेता फ्रान्सलाई उत्कृष्ट विजयको...
नबिल बैंकका एकैपटक १२ नयाँ शाखा संचालनमा
नबिल बैंकले एकै पटक १२ वटा शाखा संचालनमा ल्याएको छ । बैंकले कर्णाली प्रदेश तथा प्रदेश...
पत्रकारलाई भत्ता,प्रेस काउन्सिल खारेज हुने
सरकारले जेष्ठ पत्रकारहरुको जीवन निर्वाह भत्ताका लागि अक्षयकोष स्थापना गरेको छ । साथै सरकारले प्रेस काउन्सिललाई...
तनहुँको ऐतिहासिक नगरी बन्दीपुरमा केबुलकार सञ्चालन गरिने भएको छ । आर के बी रियल स्टेट एण्ड...
होमल्याण्ड मिडिया दशक पुरानो संचार संस्था हो ।
रियल स्टेट तथा सहरीकरणका बिषयमा केन्द्रित
यस संस्थाले म्यागेजिन,बुकलेट प्रकाशन,
अडियो—भिडियो, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र
अन्य मिडिया रिलेसनको काम गर्दै आएको छ ।
होमल्याणड मिडया प्रा लि
सानेपा ललितपुर, नेपाल
०१ – ५१८८२५५
होमल्याण्ड मिडियाका लागि
फेसबुक लाइक बक्स
© 2017 होमल्याण्ड खबर. All Rights Reserved.
Powered By : Smart Pvt.Ltd